I-otter yaselwandle: iimpawu, ukondla, ukuvelisa kwakhona kunye nezinto onomdla kuzo | Ngeentlanzi
Namhlanje siza neposi eyahlukileyo kunaleyo siqhele ukuyithetha, emalunga neentlanzi. Makhe sithethe ngayo Otter yaselwandle. Esi silwanyana sisilwanyana esanyisayo esinegama lenzululwazi I-Emhydra lutris Kwaye yaziwa kwihlabathi lonke. Yeyosapho lwe-mustelidae kwaye ihlala ezilwandle. Kule posi uya kuba nakho ukwazi zonke iimpawu, ukondla nokuzala kwesi silwanyana.
Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi nge-otter yaselwandle? Qhubeka ufunda.
2 Iminqweno ekhethekileyo ye-otter yolwandle
I-otter yaselwandle sesinye sezona zilwanyana zincinci zisikiweyo apha phandle ngenxa yesayizi yaso encinci kunye noboya. Amehlo abo amancinci abenza babonakale ngathi bajongeka ngobuso obungenatyala obuzalisa bonke abajonga ngothando. Amadoda makhulu kunamabhinqa, nangona enawo ubude obuphakathi kwe-1,2 ukuya kwi-1,5 yeemitha. Ngokuqhelekileyo zinobunzima obuphakathi kwama-22 nama-45 eekhilogram, nangona amabhinqa enobunzima obungaphantsi kakhulu (malunga phakathi kwe-14 kunye ne-33 kilogram).
Amathambo ayo aguquguqukayo ukuze ithathe indawo encomekayo. Imilenze yayo ithe tyaba ukuze ikwazi ukudada kakuhle kwaye imile okokugqibela. Iinzipho ziyafana neekati, eziququzelela eminye imisebenzi enjengokuzilungisa nokubamba kakuhle ixhoba lazo. Umsila unemisipha kwaye Ngokusisiseko bayayidinga ukuze balungelelanise ulwalathiso ababhukuda ngalo. Ikwabanceda ukuba balondoloze ulungelelwano lwabo kakuhle.
Abantu abadala banamazinyo angama-32 anemicaba ecekeceke yaza yajikeleza imisonto elungiselelwe ukugaya kunokuba isikwe. Njengophawu olukhethekileyo olusincedayo, ngokw morphologically, ukwahlula i-otter kwezinye izilwanyana ezitya inyama kukuba inee-incisors ezimbini ezisezantsi endaweni yesithathu.
Ngokubhekisele kuboya bayo, ulusu alunongqingqwa kakhulu njengoko kunjalo nakwezinye izilwanyana ezanyisayo zaselwandle. Ulusu olushinyeneyo lusebenzela ukukhusela ukubanda kwamanzi kunye nokukwazi ukulawula ubushushu bangaphakathi kakuhle ngaphandle kokuphazanyiswa bume bangaphandle kakhulu. Ngokwahlukileyo kubo, i <em> otter yaselwandle ithembele eboyeni bayo ukuze ikhusele amaqondo obushushu abandayo. Kwaye banenwele ezingaphezulu kwe-150.000 kubukhulu obuncinci kangangokuba bahlala. Baye ngaphakathi irekhodi lesilwanyana esanyisayo kunye neenwele ezininzi.
Iminqweno ekhethekileyo ye-otter yolwandle
Ezinye iimpawu zenza ukuba esi silwanyana sikhetheke ngokukodwa. Uninzi lwezi mpawu luhlengahlengiso olunxulumene nokuphucuka kwentshukumo yalo emanzini. Olona phuculo lusebenzayo kukuphucula indlela oziva ngayo kwaye ulumke ukuze uzikhusele kwiingozi kwaye uphile kamnandi.
Nazi ezinye zezo zinto:
Ngaba unakho ukwazi ukuvala iimpumlo kunye nemijelo yendlebe emanzini ukunqanda ukwaziswa kwayo emzimbeni wakho. Ngale ndlela, lahla ezinye zeengxaki ezinxulumene nayo.
Ubhontsi wesihlanu kwilungu ngalinye mde kunezinye. Le nyani inenzuzo kunye nokungalunganga kuxhomekeke kwimeko okhoyo. Kwelinye icala kuyanceda ukudada ngcono xa usemanzini, kodwa kwelinye icala kuyayekisa ukuhamba emhlabeni kwaye kuyenze ibe nzima ngakumbi.
Umzimba unobuhle obukhulu kwaye, ke ngoko, ungadada ngokulula kakhulu. Umoya ungena kuboya bawo kwaye ubenze bungabi ninzi kakhulu. Le yindlela onokudada ngokulula ngayo.
Enkosi kwiipads kwizantsi kunye neentshebe ezibuthathaka, iyakwazi ukukhangela kunye nokubamba ixhoba layo, nokuba amanzi ashukuma kakhulu okanye anamafu.
Izazinzulu zifunde ezi zilwanyana amatyeli aliqela kwaye ziye zagqiba kwelokuba imvakalelo yokujoja ibaluleke ngakumbi kunokubona ukuze silumke kwaye sibukele izilwanyana ezinokubakho.
Indawo apho ezi ntlobo zihanjiswa khona ikakhulu zikummandla wePacific Pacific. Yandiswa ukusuka emantla eJapan ukuya eBaja California eMexico. Indawo yokuhlala ephambili yindawo apho amanzi onxweme enzulu. Ngokukodwa malunga ne-15 ukuya kwi-20 yeemitha.
Kwizihlandlo ezininzi banokubonakala bedada kufutshane nonxweme ngenxa yobukho beendawo ezikhuselweyo kwimimoya yolwandle enamandla. Kwezi ndawo i-otter yaselwandle ithatha ithuba lokuphumla ingalwi nemisinga.
Ezinye iindawo zokuhlala apho sinokuzifumana khona amahlathi amakhulu e-kelp, izinto ezinamatye, kunye nezithintelo zamatye. Ukuya emantla bayayeka ukusasazeka ngenxa yobukho beqhwa lase-Arctic.
Ngenxa yemetabolism ekhawulezayo, i-otter yolwandle ifuna ukutya rhoqo. Bafuna ukungenisa izondlo ezigubungela phakathi kwama-25 nama-40% obunzima bomzimba wabo. Zizilwanyana ezitya inyama kwaye okona kutya kwazo ziphambili ezinjenge-mussels, iminenke, ii-urchins zolwandle kunye neentlanzi ezincinci.
Ukutya oku kutya kufuneka bavule amaqokobhe okanye basebenzise amatye kunye neenkuni ukubanceda. Ezi ntshukumo zifuna isakhono esithe kratya kwaye ngenxa yokuba banomnwe omde. Njengokuba ingasoloko ikutya konke ukutya ekufumanayo, i-otter yaselwandle ivelise inkqubo yokuziqhelanisa nezi meko ukugcina ukutya kwayo kwaye ikutye kamva.
Yipokotho abayenzileyo yolusu lwabo olwandisiweyo nolukhululekileyo kwisifuba sabo apho ungagcina ukutya ongazukukutya okwangoku kwaye ifunyanwa ngokuqhubekekayo ngelixa idada okanye ifakwe emanzini. Nje ukuba ipokotho yakhe igcwale okanye ilambe, usebenzisa uboya bakhe ukuziqengqa, adade emqolo, kwaye azenzele ukutya kuko konke ukutya okugciniweyo.
I-otter yaselwandle inabancinci unyaka wonke, nangona kunjalo zihlala rhoqo ngeenyanga zikaMeyi nangoJuni xa amaqondo obushushu emnandi ngakumbi kukho intabalala yokutya. Ixesha lokumitha kolutsha luhlala phakathi kweenyanga ezi-4 ukuya kwezi-20. Lo mahluko ubanzi ubangelwe kukuba kukho ukulibaziseka kokumiliselwa. Oku kukuba umntu obhinqileyo unakho ukubandisa iqanda alicombileyo ukuze likhule xa iimeko zokusingqongileyo zilungele ukuveliswa kwakhona.
Le yindlela entle yokusinda xa ujongene neemeko ezibi zokusingqongileyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi uza kuyazi ngcono i-otter yolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Intlanzi yolwandle